Kulan looga hadlayay xoojinta Amniga oo lagu qabtay xarunta Dowladda Hoose “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kulan looga hadlayay xoojinta Amniga oo lagu qabtay xarunta Dowladda Hoose “SAWIRRO”
Guddoomiye Ku-xigeenka 1aad ee Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed Tuulax ayaa maanta kulan looga hadlayay dardargalinta howlaha Amniga Caasimadda la qaatay Guddoomiye ku xigeenadda Amniga ee 17-ka Degmo ee Gobolka Banaadir.
Kulan ayaa waxaa uu Guddoomiye Ku-xigeenka ugu horeeyn warbixinno kaga dhageestay Guddoomiye ku xigeenadda Degmooyinka, kuwaas oo ka xog waramay Xaaladaha Amni ee Degmooyinka, waxaana ay soo jeediyeen talooyin muhiim oo u badan xal u helida Amniga Caasimadda.
Mudane Tuulax Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Gobolka Banaadir oo gaba gabadii ka hadlay kulanka ayaa sheegay in loo baahanyahay in Maamuladda Degmooyinka ay Masuuliyad xoogan iska saaraan Amniga magaalada, waxaana u intaas ku daray in Maamulka Sare ee Gobolka Banaadir ay ka go’an tahay wax ka qabashada falalka Amni daro ee mararka qaar ka dhaca Muqdisho.
“Waxaan ka Maamul ahaan naga go’an in aan si wanaagaan kaga shaqeyno Amniga Gobolka Banaadir, waxaan rabnaa in Maamulada Degmooyinka ay qaataan kaalin wanaagsan oo masuuliyadd ku dheehantahay maadaama shaqada ayaga ka soo bilaabaneyso.”ayuu yiri Guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee Amniga iyo Siyaasada e Gobolka Banaadir.
Abaanduulaha Ciidanka XDS oo xaqiijiyay in dagaalkii Buula-mareer qasaaro xoogan loogu geystay Al-Shabaab